Mila fitaomam-panahy tsy tapaka ny ankizy. Ny pejy fandokoana sy ny boky fandokoana dia mandray anjara betsaka amin'ny fampiroboroboana ny fahaiza-mamorona ny zanantsika faralahy. Tsy misy fitsipiky ny ankihibe raha toa ka efa antitra ny zaza vao afaka manomboka mandoko na rehefa tokony hanomboka hoso-doko tanteraka izy ireo. Zava-dehibe hatrany anefa fa ny pejy fandokoana atolotra dia natao ho an'ny ankizy.
Mpangaro amin'ny simenitra pejy
Ary eo indrindra no misy ireo pejy fandokoana maimaimpoana ho an'ny ankizy. Tongasoa eto amin'izao tontolo izao mahafinaritra ny tranokala fananganana, izay mahaliana ny ankizy kely aza miaraka amin'ireo masinina sy olona marobe. Amin'ny fipihana ny sary dia misokatra amin'ny endrika pdf ny modely fandokoana: